Ngathi | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd. zitshintshi
I-Brocade Smart Space Technology Co, Ltd.yishishini elibhalisiweyo eliphambili kwiPhondo laseSichuan, China, kwaye liyinxalenye yenkqubo yotyalo-mali enkulu ye-High Tech Zone eChengdu. Iimveliso zethu ikakhulu zibandakanya ukutshintsha kwevidiyo yokucacisa okuphezulu kunye nabasasazi, kunye nenkcazo ephezulu nelahleko Iimveliso zothumelo lwexesha-lokwenene. Iimpahla zethu zihlala zisetyenziswa kumzi mveliso we-HDMI wokubonwayo kunye nokufundiswa kwemultimedia, iinkomfa zevidiyo, ukuboniswa kwescreen esikhulu, imiboniso, uphando lwezenzululwazi, kunye nefilimu kunye nomdlalo wokudubula kumabonwakude. Utyalomali lwethu lwesigaba sokuqala yi-RMB 500 yezigidi, notyalo-mali olupheleleyo ekugqibeleni lufikelela kwi-RMB iibhiliyoni ezimbini.
Njengenkampani ephethwe ngokupheleleyo yiBrocade AI Group, sinobuchwephesha obuzimeleyo obukhokelayo kushishino, iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi, kunye namandla eR & D-kunye neempahla zethu ziphuhliswa ngaphezulu kwemigca yokuvelisa eyi-10 yokuqinisekisa ukusasazwa okufanelekileyo kwabasebenzisi kwihlabathi liphela. Iqela lethu leengcali linokuphatha ii-odolo ze-OEM ezizodwa kubathengi kwaye sinokusebenza ngobungakanani obukhulu kunye nomncinci.
IBrocade Group, ingcali yezoqoqosho lwedijithali, iBrocade Group ngummeli wamashishini eChengdu kwiPhondo laseSichuan kwiNkomfa yeShishini yaseSichuan kunye neprojekthi enkulu yokukhuthaza utyalo-mali eChengdu High-tech Zone. Alibaba Cloud eligunyazisiweyo ngokusemthethweni iqabane lendalo. Ngokusekwe kwitekhnoloji kunye notyalo-mali ngobuchule, jolisa kuphuhliso lwesoftware kunye nobuchwephesha behardware ezinje ngeemveliso ezi-smart, isoftware yedatha enkulu, i-Intanethi yezinto, njl. Njl., Amalungelo azimeleyo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwiindawo eziphambili, nangokonyuka nokuhla komjikelo woshishino uyilo, ngokweedolophu ezi-smart, imfundo ye-smart, inkcubeko kunye nokuyila oku-smart, indawo ehlakaniphileyo, imeko yezemali ekhawulezileyo, ezemali kunye nezinye iinkalo zemfuno zorhwebo ukwenza iimveliso ezinxulumene neenkonzo kunye neenkonzo, kunye nokwakha ishishini lokuqala lokuyila kunye nobukrelekrele bokuzenzela Inkqubo yendalo.
IBrocade Group ibambelela kwinkcubeko yobumbano kwinto entsha, ukusebenza ngokukuko, ubugwenxa kunye nokuthembeka, kwaye igqibe ngokubekwa kwindawo ehlanganisiweyo "yamazwe aphesheya, ukubeka eqongeni, ukuphuculwa kwemveliso kunye ne-ecology", ejolise ekwakheni ishishini lokuqala lokuyila.
Izinto ezintsha zetekhnoloji, ulawulo lwezinto ezintsha, ezikhokelela kwikamva
Funa inyani kwiinyani, uziqhelise ngokwakho, kwaye usebenze nzima
Ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, ukusebenzisana, kabini iziphumo kunye nesiqingatha somzamo
Ukunyaniseka nokuthembeka, okungaguquguqukiyo ngaphandle nangaphakathi, ukuthembela emhlabeni
UGqirha Sha Guo Ingcali yeArtificial Intelligence, uSihlalo weQela
Abaphumelele kwiYunivesithi yaseTsinghua (iBachelor kunye ne-Master) kunye ne-FIU (Ph.D.) e-United States. Utitshala wakhe nguNjingalwazi uSun Jiaguang, isifundiswa seTshayina Academy of Science. UGqirha Sha Guo yingcali enkulu yedatha kwaye upapashe phantse amaphepha angama-30 emfundo kwiijenali zamazwe aphesheya kunye neenkomfa ezinje nge-IEEE. Gxila kubukrelekrele bokuzenzela, idatha enkulu kunye nokusetyenziswa kwayo kunye nezinto ezintsha. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yolawulo oluphezulu kunye namava okusebenza kwiinkampani zamazwe aphesheya, umseki we-NUCOM, opharetha owaziwayo waseMelika, uthengisa ngaphezulu kwe-100 yezigidi zeedola zaseMelika. Wayekhe wasebenza kwiziko loPhando nge-IBM eMelika, yayiliqela lokuqala labarhwebi kwishishini le-Intanethi, ekwangumlingani wamaziko amaninzi eengxowa-mali.
U-Hao Fang, i-CEO yeQela
Wathweswa isidanga kwiYunivesithi yasePeking, useke kwaye watyala imali kwiinkampani kumashishini amaninzi, kwaye uneminyaka engama-21 yeshishini loshishino kunye namava okulawula ishishini, kubandakanya imfundo, uyilo lweshishini, ubugcisa bokuyila, itekhnoloji ephezulu, urhwebo lwamanye amazwe, njl.
Kwiminyaka ye-1990s wayesebenza e-China i-Elektroniki yoPhuhliso lweNkampani yoPhando lweZiko loMphathiswa Wezemveliso kunye neTekhnoloji yoLwazi njengentloko yoyilo loyilo. Waseka iFrance SACAVIN Knights kunye nePeking University Philharmonic Club.
Ukuqonda iQela leBrocade
Zonke izinto ezinokwenzeka kuwe
Ngokusekwe kwitekhnoloji kunye notyalo-mali ngobuchule, jolisa kuphando kunye nophuhliso lwesoftware kunye nobuchwephesha behardware ezinje ngeemveliso zobuqili kunye neqonga elikhulu lesoftware yenkqubo yedatha, amalungelo azimeleyo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwiindawo eziphambili, nangobeko lwamatyathanga oshishino anyukayo nawasezantsi, ngokweedolophu ezi-smart, imfundo ebukrelekrele, iimfuno zeMarike ehlakaniphileyo kumacandelwana anje ngobuchule benkcubeko, indawo ehlakaniphileyo, kunye nongxamiseko lwedijithali ukwenza iimveliso kunye neenkonzo ezinxulumene noko, kunye nokwakha ishishini lokuqala lokuyila kunye nomzi mveliso wezobuntlola.
IBrocade Artificial Intelligence Group ngummeli otyikityo wamashishini e-Chengdu kwiNkomfa yeShishini yaseSichuan kunye neyona projekthi iphambili yokukhuthaza utyalo-mali eChengdu High-tech Zone. Ngokusebenzisa izinto ezintsha ezizimeleyo zetekhnoloji engundoqo, enezibonelelo ezibonakalayo kwimithombo yoshishino, izibonelelo zejelo, kunye neendlela ezinkulu, ukujonga okufunwa yimakethi, kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso njengenjongo, iQela libeke isiseko esiluqilima sophuhliso olukhawulezileyo kunye nentsebenziswano yokuphumelela kunye namaqabane .
I-Brocade ibaluleke kakhulu kwisicwangciso seetalente. Ngaphezulu kwe-95% yeqela lolawulo eliphambili eliphumelele kwiiyunivesithi eziphambili. Ngaphezulu kwama-50% zii-PHDS. Bangaphezu kwama-30 ekhulwini ababuyayo.
Inani loogqirha kunye neenkosi alikho ngaphantsi kwe-50%
Akukho ngaphantsi kwama-95% abafundi abanezidanga ze-bachelor okanye ngaphezulu
Inani labahlohli, oonjingalwazi kunye neesuphavayiza zobugqirha alikho ngaphantsi kwe-5%
Inani lababuyayo aliyi kuba ngaphantsi kwe-30%
IBrocade Group ngummeli osayinayo wamashishini aseChengdu kwiNkomfa yeShishini yaseSichuan kunye neprojekthi enkulu yokukhuthaza utyalomali eChengdu High-tech Zone. Ngokusebenzisa izinto ezintsha ezizimeleyo zetekhnoloji engundoqo, enezibonelelo ezibonakalayo kwimithombo yoshishino, izibonelelo zejelo, kunye neendlela ezinkulu, ukujonga okufunwa yimakethi, kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso njengenjongo, iQela libeke isiseko esiluqilima sophuhliso olukhawulezileyo kunye nentsebenziswano yokuphumelela kunye namaqabane .